Ingxoxo no-Oguta Job Francis waseBusitema University, e-Uganda - AfricArXiv
Kushicilelwe ngu UJohanssen Obanda noPriscilla Mensah on 14th Agasti 2020 14th Agasti 2020
Siyithola kanjani enye indlela eshibhile yokukhiqiza ukudla okwanele okwanele ukondla umhlaba? Funda izimpendulo zikaJob Oguta ngomthelela wocwaningo lwakhe kwi-SDG Goal 2 - Zero Hunger, kanye neminikelo ebalulekile ososayensi abanjengoMnu Oguta abayenzayo ezwenikazi lase-Afrika.
Ngabe izilimo ze-biotech zingayithuthukisa impilo yenhlabathi?
Inselele yokuncintisana kakhulu yase-Uganda igxile ezicini ze-biotechnological. Ngonyaka we-2017, umncintiswano wonyaka we-5th kazwelonke we-biotechnology essay wahlelwa ngaphansi kwendikimba; 'izitshalo ze-biotech zingayithuthukisa impilo yomhlabathi?' futhi yona le ndaba yayiyinombolo 8 esigabeni seYunivesithi.
Yisho njengo: UJobe Francis, OJ (2019, Novemba 9). Ngabe izilimo ze-biotech zingayithuthukisa impilo yenhlabathi? https://doi.org/10.31730/osf.io/vzbdg
B.Sc. Kwezokudoba kanye Nezokuphathwa Kwemithombo Yamanzi eNyuvesi yaseBusitema, e-Uganda
Amaphrofayli aku-inthanethi: I-ORCID iD // Twitter // Iphrofayili ye-OSF // Iphrofayili Yekhampasi Yosomabhizinisi
Ngangihambele umhlangano wokucobelelana ngolwazi owawuphethwe nguDkt Kizito Omala, owawugxile ekuzalweni kocwaningo nasekuvulekeni, lapho enganquma khona ukuqala ngephepha locwaningo.
Wake wabelana ngemiphumela kokunye okubhaliwe noma kwizikhungo zezikhungo?
Yebo nginakho, ngabelane ngoprintwe ku-OSF; "Ucwaningo lokuthi kungenzeka yini ukusebenzisa izibungu ezindizayo zesosha elimnyama njengokudla kweNile tilapia noma ingxenye ethile kokuphakelayo".
UJobe Francis, OJ (2019, Juni 13). Amasosha amnyama andiza izibungu njengengxenye enkulu yamaprotheni ekudleni kwaseNayile tilapia. https://doi.org/10.31219/osf.io/4uxsz
Angiwuthathi kalula umzamo weNhlangano Yezizwe ngama-SDG wokufinyelela umhlaba weZero Hunger kungakapheli iminyaka eyishumi noma emibili. Ikhono lokuthola enye indlela eshibhile yokukhiqiza ukudla okwanele okusezingeni ukondla umhlaba kuzoba iphupho eligcwaliseka. I-Afrika isalokhu iyisifunda esengozini enkulu emhlabeni ngenxa yezici eziningi.
Yibuphi inselelo obheke ukuyilungisa lapho uqala lo msebenzi futhi yini okutholile okuholele kwimiphumela yakho yamanje?
Noma iningi labantu base-Afrika bezolimo, iningi labalimi abasezindaweni ezimpofu kakhulu alinawo umhlaba wokufuya ngakho-ke bahlala bempofu ngoba abathengisi umkhiqizo wabo.
Ngikhuluma ngokuncika kakhulu ekudobeni izinhlanzi okungezona ezokudoba zasemanzini ngaphandle kwezizathu zezindleko zezimbewu nokuphakelwa, kepha singazithola izifunzo zasendaweni nezemvelo. Umbuzo kimi kwaba: singabemukela kanjani ububi obudingekayo? Iphepha lokucwaninga liphendula umbuzo kangcono kakhulu.
Ngokubona kwami, ucwaningo lwe-undergraduate ngokuvamile aluthathwa ngokungathi sína. Inselelo kuze kube manje ukuthi abantu abaningi abanikeli impendulo ngalokhu abakutholayo emibhalweni yami, noma ngabe i-athikili yami ibukwe izikhathi ezingama-61 ku-AfricArXiv. Kuzojabulisa uma othile ekhuluma ngokuthi mhlawumbe bazithola kanjani izindatshana zami nokuthi ngingathuthukisa kuphi.
Okwamanje asikabi semgwaqweni, bambalwa kakhulu abantu abacwaningayo futhi noma sishicilela, bambalwa kakhulu abantu abathola isikhathi sokufunda ngezindatshana zocwaningo. Ngiyethemba ngolunye usuku sifika lapho futhi sikhombise umhlaba indlela okufanele uhambe ngayo.
Ngiyabonga ngengxoxo ethokozisayo. UMnu Oguta usebenza ukuletha izisombululo zokuphepha kokudla e-Afrika. Ukufeza i-Zero Hunger, sidinga ukuhlola ezinye izindlela ezingabizi kakhulu zokukhiqiza ukudla okwanele kwekhwalithi yabantu. Ukucwaninga ngeziqu e-Afrika kudinga ukwazisa nokunakwa okuningi kunalokho okwenzeka njengamanje.
Ngabe ikhona imicabango noma imibuzo ka Mnu Oguta? Ungabashiya ebhokisini lokuphawula elingezansi.
Abahleli: UJohanssen Obanda (umbhalo) noPriscilla Mensah (isithombe)
Tags: I-AfricanResearchI-SDG2Ugandazero Hunger
UNuwampaire Julian	· 15th Agasti 2020 ngo-9: 13 ekuseni
Lowo ngumsebenzi omuhle kakhulu, kuyiphupho lami futhi ukuthi ngifike lapho ngishicilele iphepha lami lokucwaninga ukuze abanye bakwazi ukufunda bese sithola ulwazi lokuthi singawushibha kanjani umhlaba lo ngokudla okunomsoco (izinhlanzi) nokunciphisa ukuthembela ngokweqile kokungenisiwe izifunzo ezibizayo.
Oguta Job Francis	· 16th Agasti 2020 ngo-7: 01 ekuseni
Kuqala ngephupho, khona-ke ukusebenza kanzima nokuzinikela, nakanjani uzobona okuthile.
Ngikufisela okuhle kodwa ohambweni lwakho
Obanda	· 17th Agasti 2020 ngo-4: 16 ekuseni
Wamukelekile kakhulu ukushicilela ucwaningo lwakho. Siyakujabulela ukusiza kule ncwadi. Funda kabanzi lapha: https://info.africarxiv.org/before-you-submit/
U-Oloya Lawrence Kabila	· 15th Agasti 2020 ngo-6: 37 ntambama
Umsebenzi omuhle, kuyiqiniso ukuthi i-Afrika njengoba izwekazi lidinga umzamo omkhulu ukuze sihlangabezane ne-SDG yendlala engatheni.
JOHN MUNYAMBABAZI	· 15th Agasti 2020 ngo-9: 35 ntambama
Waaooh, lokhu kuhle kakhulu futhi kuyathakazelisa
Ngokwami ​​ngiyabonga Mnu Oguta